Services dzakapihwa ne blog | Kuumbwa uye kudzidza
Ndeapi masevhisi ayo blog inogona kupa?
Nhasi, vanhu vazhinji vatora danho rekutanga gadzira blog sezvo iri nyore uye yemahara chirongwa. Nekudaro, bhurogu pachayo haikwidziridze mhando yehunyanzvi. Iyo blog ingori yepakati chete, ndiko kuti, iko chaikoiko kweiyi nyanzvi nzvimbo ndiye munyori iye amene anoisa maawa ebasa muchirongwa ichi kwaanosarudza kupa imwe nongedzo. Kunze kwekubatsira kwehupfumi kunoitwa nevamwe vema blogger kuburikidza ne kuparidzirwa, iyo chaiyo sosi yeblog ndeimwe. Ndeapi masevhisi ayo blog inokupa iwe?
1. Chimwe chakakosha ndechekuti inokupa iwe mukana wekuve ne portfolio emabasa mune imwe svikiro. Kana nyanzvi yechidiki ikasiya yunivhesiti, zvakakosha kuti uyedze kubhadhara kushomeka kwehunyanzvi ruzivo neruzivo. Uye blog portfolio inogona kuve yakanaka yekuvhavha tsamba kuratidza rako pachako basa.
2. Kuburikidza neyako blog, zvinokwanisika kumisikidza networking, sangana nedzimwe nyanzvi dzinoshanda munzvimbo yakafanana. Maficha ayo angangodaro munyori weblog aisakwanisa kuita neimwe nzira sezvo imwe yemabhenefiti makuru enetiweki mukana wekubata vangangove vaverengi kubva kunzvimbo dzakasiyana kwazvo kuburikidza neblog.
3. A blog inzira yekugadzira iyo yekuvandudza yako kutanga kwako wega kugovana zvemukati zvemukati. Izvi zvekuzvida-wega ndiyo hwaro hwedigital yakanaka yepakati. Ndokunge, chakanyanya kukosha ndechekuti munyori anoda zvakafanana kana blog yake ichiverengwa nevateveri vazhinji uye kana achitanga uye achiziva kuti haasati aine vateereri venguva dzose.
4. Iri bhurogu inogona kuva svikiro kuburikidza neyaunopa mabasa ehunyanzvi. Kubva pane ino maonero, icho chisingadhuri kushambadzira chishandiso.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kuumbwa uye kudzidza » Studies » Jobho Kubuda » Ndeapi masevhisi ayo blog inogona kupa?
Philosophy Unganidzo Kudzidza Kufunga
Chii chaunoda kuti udzidze zvirinani (zvinhu zvekunyama)